Izimfudu ziza ogwini lwaseCatalonia ngenxa yokushintsha kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukufudumala okuqhubekayo kwamanzi ngenxa yokushintsha kwesimo sezulu kanye nokushisa komhlaba kubangela izinhlobo eziningi zezilwane ukuba zihambise noma ziguqule izindlela zazo zokwakha izidleke. Kukhona nezinye izinhlobo eziguqula indawo yazo yokuhlala ukuze zivumelane nezinga lempilo elingcono.
Kulokhu, Ukukhuphuka kwamazinga okushisa wamanzi olwandle kudonsela ngaphezulu ufudu we-loggerhead. Lolu hlobo lusengozini yokuqothulwa futhi luya emaphethelweni aseCalatuña esidlekeni. Lokhu akukaze kubonakale iminyaka eminingi, kepha kuya ngokuya kukhula njalo.
Izimfudu isidleke osebeni
Iqiniso lokuthi izimfudu ziya emaphethelweni eCatalonia zingadala ukudideka okuhlukahlukene noma ukuthi ababhukudi bakhiqize imithelela kubo enqubeni yabo yokwakha isidleke. IGeneralitat icele bonke abageza ukuthi bangaziphazamisi lezi zilwane nokuthi, lapho bethola esinye sazo, bazise. Kusukela ngo-1972 kube nemizamo eyishumi yalezi zimfudu yokwakha isidleke ogwini lwaseCatalonia futhi, ngaphezu kwakho konke, eminyakeni yamuva.
Imithelela eyenziwa ngabantu ekukhuleni kwalezi zimfudu idala ingxenye kuphela yazo ukuba ichume. Enye ingxenye ayisindi ngenxa yokungenelela komuntu.
Kuleli hlobo, ochwepheshe balindele izimfudu eziningi ze-loggerhead (Caretta caretta) uye ogwini lwaseCatalan, lapho ezingafikanga lapho lolwandle lwalubanda kunalezi zilwane ezikhetha ukuhlala esidlekeni. Kuze kube manje, amabhishi aseGrisi naseTurkey, empumalanga yeMedithera, kwakuyizindawo ezithandwayo zalolu hlobo uma kukhulunywa ngokuzalanisa ngaphakathi kweYurophu.
Ukunciphisa imithelela eyenziwe ngabantu kulezi zimfudu, iGeneralitat yethule umkhankaso wokuqwashisa lapho kuchazwa khona izinyathelo ezizolandelwa lapho kuhlangana ufudu. Ngale ndlela, kwenziwa umzamo wokuthi kungaphazanyiswa ukuzala kwawo okwenzeka phakathi kukaJuni noSepthemba.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Izimfudu zifika ogwini lwaseCatalonia ngenxa yokushintsha kwesimo sezulu
Isikhathi sokugcina seqhwa nokuthi abantu bafika kanjani eMelika